Tafavoaka velona ireo olona efatra tao anatiny : nitsoraka tao anaty ranon’Ikopa ilay Renault Laguna | NewsMada
Tafavoaka velona ireo olona efatra tao anatiny : nitsoraka tao anaty ranon’Ikopa ilay Renault Laguna
Araka ny voalazan’ireo nahita, nifampitifitra jiro ”phare” ilay kamiao mercedèce 1513 sy ity fiara Renault Laguna.Voadon’ilay kamiao ity farany, ary tafatsoraka tany anaty ranon’Ikopa, izay mbola niakatra be, teny amin’ny lalana digue Andranomena. Tafavoaka velona ihany saingy nisy naratra ireo roalahy sy roavavy tao anatiny.
Omaly tokony ho tamin’ny 2 ora maraina, iray nilatsaka teny amin’ny reniranon’Ikopa, teny Andranomena ny fiara Renault Laguna. Difitra tao anaty rano mihitsy ny fiara, kanefa soa ihany fa tafavoaka tao avokoa ireo olona dimy mpandeha tao anatiny.
Araka ny fanazavan’ny fianakavian’ireo mpandeha tao anatin’ilay fiara Laguna, nodomina kamiao avy ao aoriana izy ireo ka nampilatsaka ny fiara tanaty rano izany. « Nitsoaka ilay kamiao, fa ireo dimy mianadahy tao anaty fiara kosa, nifanavotra nivoaka tao anaty fiara, efa difitra ny rano », hoy ny fanazavana. Tsy nisy ny aina nafoy, roa ny naratra ary nentina teny amin’ny HJRA avy hatrany. Nahazo ny fitsaboana azy izy ireo ary efa namonjy fodiana, ary nikarakara sy nampiakatra ny fiara teny Andranomena ny tompon’ny fiara, omaly.
Andanin’izany kosa anefa, nilaza ny olona nahita ity loza ity teny an-toerana fa nifanena tamin’ny kamiao nandrehitra jiro “phare” ilay Laguna io ka voadoana avy eo ary izao nifatratra tany anaty rano izao. “Nandeha mafy ny fiara, samy nifampitifitra “phare” ire oar voadoana ilay Laguna izay vao lasa tany anaty rano. Nitsoaka kosa ilay kamiao”, hoy ny fitantarana. Voalazan’ireto nahita maso ny loza fa olona efatra no navotan’izy ireo tao, ny telo nalefa tamin’ny fiara nandalo nakany amin’ny HJRA, raha nijanona teo ny mpamily. Fantatra fa novakiana ny fitaratra aoriana nahafahan’ireo olona tao anatiny nivoaka.
Nanao ny fanadihadiana ny teo anivon’ny mpitandro filaminana tonga teny an-toerana, nandray ireo vaovao roa somary mifanohitra ireo. Rehefa nanontaniana ny polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana, nilaza fa mbola anatin’ny famotorana izy ireo.
Antoandro vao voasintona ny fiara
Tonga maraina ny tompon’ny fiara nampiakatra izany tao amin’ny reniranon’Ikopa. Teny an-toerana ihany koa ny mpamonjy voina nanampy tamin’ny fikarohana izay entana tavela tany anaty rano, ny varavaran’ny fiara, sns. Nosintonina tamin’ny kamiao ilay fiara vao tafakatra, omaly tokony ho tamin’ny 1 ora antoandro.
Araka ny filazan’ny olona eny amin’iny Andranomena iny, matetika ny lozam-pifamoivoizana amin’ny Digue. Anisan’ny mahatonga izany ny fandehanana mafy na andro na alina. Maromaro ny fiara efa nivarina teny amin’ny Digue, ankoatra ny olona voadona ka maty teny. Mitsoaka hatrany ny fiara mamoa-doza amin’ny ankapobeny, ankoatra ireo tra-doza ka tsy afa-mihetsika. Tsy misy ny mpitandro filaminana miasa amin’ny alina ka afaka hamehy ny hafainganam-pandehan’ny fiara. Tompon’andraikitra amin’ny tenany ny mpamily tsirairay avy ka na handeha mora ho tonga soa amin’izay aleha, na handeha mafy kanefa tsy mahafehy ny familiana raha sendra ny tampoka.